Pacman: sida loo ciyaaro talaabo talaabo
Si aad ugu ciyaarto qaniisyada khadka tooska ah bilaash, waa inaad sameysaa raac tilmaamahan talaabo talaabo ah:
Isla marka aad gasho goobta, ciyaarta waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Waa inaad kaliya garaac ciyaarta oo waxaad bilaabi kartaa xulashada qaabeynta aad jeceshahay laakiin aad jeceshahay. Mar alla markii aad guuleysato ciyaar waad isleegi kartaa. Waxaa jira wadar ahaan labaatan iyo afar heer.
Hadda, waxaad ka heli doontaa badhano waxtar leh. Karaa "Ku dar ama ka saar codka", Sii badhanka"Play"Oo bilow ciyaarta, waad awoodaa"Hakad"iyo"Dib u Bilow"Xili walba.
Wuxuu maamulaa inuu cuno mid kasta oo nacnac ah isagoon la cunin.
Kadib markaad buuxiso ciyaar, guji "Dib u bilow" in dib loo bilaabo.
Pac-Man waa dabeecad ciyaar waali ah oo caan ah laga bilaabo XNUMX-yadii. Ahaa loo soo bandhigay meeraha ciyaaraha fiidiyowga ee Japan bishii Meey 1980, XNUMX. Cayaartu waxay timid USA 5 bilood kadib waxayna si dhakhso leh u gaadhay 000 nuqul oo la iibiyay.
Marka laga reebo nooca arcade, Pac-Man ayaa sidoo kale loogu talagalay Atari XNUMX. Sanadihii la soo dhaafay, ciyaarta waxay kasbatay daraasiin iyo daraasiin noocyo casriyeysan ah oo loogu talagalay qalabka casriga ah ee casriga ah. Brazil gudaheeda, dabeecadda loo yaqaanay 'Kaalay-Kaalay' sidoo kale waa guul.
Iskusoo wada duuboo, fikradda ciyaarta ayaa ahayd in lagu kormeero dabeecad huruud ah oo cunaysa kiniiniyada ku dhexjira maze. Isla mar ahaantaana, ciyaaryahanka waa inuu ka baxsado 4 daawadayaal ah oo isku dayaya inay ka adkaadaan.
Namco wuxuu rabay erey ka duwan kulamada toogashada, waqtigaas waa la wada ogaa. Markii hore, Iwatami wuxuu ogaaday inuu leeyahay dhiirigelinta dabeecadda isagoo arkay pizza bilaa jeex ah.
Si kastaba ha noqotee, asalka dabeecadda sidoo kale wuxuu leeyahay noocyo kale. Sida laga soo xigtay Iwatami naftiisa, muuqaalka Qaniinyo waxaa ku dhiirrigeliyay qorista Jabaan ee ereyga "kuchi", afka.
Isla markii la abuuray, dabeecadda waxaa loo yaqaanay Qaniinyo. Jabaaniis ahaan, higgaadinta puck iyo pac waa isku mid, paku. Marka loo eego quraafaadka waddanka, waxaa la ogaa in Paku uu lahaa rabitaan weyn. Tan ka sokow, eraygu wuxuu u shaqeeyaa sida onomatopoeia inuu furo oo xiro afka markuu wax cunayo.
Dhinaca kale, magaca Puck wuxuu u eg yahay taco af Ingiriis ah. Marka markii ciyaarta la keenay Mareykanka, Namco wuxuu doortay inuu ugu yeero Pac-Man.
In kasta oo markii ugu horreysay laga bilaabay Japan, haddana waxay ahayd imaatinka Mareykanka markay ka tagtay raadkeeda dhaqanka pop-ka. Guusha ciyaarta waxay ahayd mid layaableh taas oo kaliya toban sano oo daabacaad ah ayaa uruursaday bilyan doolar, kaliya qolalka ciyaarta ee Mareykanka.
Tobanka sano ee soo socda, qiimaha in ka badan labanlaab, oo gaaray US $ 500 bilyan. Maanta, rukhsaddu waxay soo ururisay ku dhowaad saddex iyo toban bilyan oo adduunka ah. Tani waxay ka dhigan tahay inay ka sarreeyaan oo keliya kuwa soo duulaya (oo ku dhowaad afar iyo toban bilyan oo doolarka Mareykanka ah) liiska kuwa ugu faa'iidada badan meeraha.
Tan iyo noocii ugu horreeyay ee arcadada, Pac-Man wuxuu ku guuleystay in ka badan soddon taxane. Dabeecadda wali waxay u muuqataa muuqaallo ka baxsan xayeysiiskiisa. Super Smash Bros, si aad tusaale ugu noqotid, kubbadda jaalaha ah ayaa loo dooran karaa mid ka mid ah dagaalyahannada.
Waa maxay Pacman?
Qaniinyo waa ciyaar elektaroonik ah oo uu abuuray Tōru Iwatani shirkadda Namco. Asal ahaan waxaa loo soo saaray Arcade sannadihii 80-meeyadii, waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ciyaaraha maanta, oo leh noocyo casri ah oo loogu talagalay konsollo badan iyo taxaneyaal kuwa kale oo badan.
Waa ciyaar aad u fudud: laacibku wuxuu ahaa a madaxa wareegsan oo leh af kaas oo furaya oo xiraya, oo loo dhigay malaawin fudud oo kiniinno ka buuxo iyo afar daawadeyaal ah oo isaga hareeyay. Ujeeddadu waxay ahayd cun kiniin kasta iyo adiga oo aan cirfiidku kugu dhicin, heerka horumarka ah ee kakanaanta.
Pac-Man waa mid ka mid ah shakhsiyaadka loogu jecel yahay uguna caansan ee ku jira qalabka ciyaarta fiidiyowga ee XNUMX-yadii. Caddaynta tani waa caan ka mid ah xitaa kuwa ugu da'da yar, oo aan xitaa ciyaarin ciyaarahooda.
Iyo haddii aad taageere u tahay dabeecaddan yar ee huruudda ah, fiiri qaar ka mid ah xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan xayeysiintiisa.
Ujeedada ciyaarta ayaa ah cun mid kasta oo ka mid ah marmarka dhoobada iyadoo aan cirfiidku kugu dhicin. Markaad isku dhacdo kiniin, the Qaniinyo liqaysa waana inay ka baxdaa shaybaarka. Haddii ciyaaryahanka uu cuno mid kasta iyo marwalba sharooto, ciyaaryahanka ayaa maraya marxaladda. Haddii ciyaaryahanka uu cuno mid kasta oo ka mid ah shaararka mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah mazes bilaash ah, wuu ku guuleystaa ciyaarta.
Dhaqdhaqaaqa kaliya ee uu adeegsado isticmaalaha ayaa ah adigoo u maraya furayaasha jihada horay u soco, wajiga gadaal, bidix iyo midig, iyadoo ujeedadu tahay in laga fogaado daawadayaasha oo la cuno kiniiniyada ku faafsan carqaladda.
Markay daawadayaashu isku dhacaan Qaniinyo dhintaa, sidaasna ku lumiyaa naf. Ciyaaryahanku wuxuu leeyahay laba nolol oo dheeri ah, oo lagu soo bandhigo baarka hoose ee shaashadda. Markaad naf dhinto oo aad isticmaasho nolol dheeri ah, tirada kaniiniyada ku haray wajiga ayaan isbadalin laga bilaabo waqtiga dhimashada Qaniinyo, qof kastaa wuxuu ku noqdaa xaaladdii ugu horreysay ee wejiga.
Xaaladda noocaas ah, si loo buuxiyo masraxa (ama ciyaarta), ciyaaryahanka kaliya wuxuu u baahan yahay inuu ka walwalo kiniiniyada haray. Marka ciyaaryahanka noloshiisa ku waayo isku dhaca daawadayaasha, wey luminayaan ciyaarta.
Xawaaraha muuqaalka iyo Qaniinyo dhab ahaan waa isku mid, laakiin, sidii ciyaartii asalka ahayd, kiniiniyada super-ka ah waxay hoos u dhigayaan muuqaalka boqolley ahaan waxayna sidoo kale u oggolaanayaan Pacman way cuneen.
Markii la cuno, kaliya "indhaha ruuxa" ayaa haray, oo ay tahay inuu ku laabto bartamaha labyrinth, halkaas oo hadhaagii muuqaalka uu mar kale noqdo muuqaal soo noqnoqonaya Pacman. Heer kasta iyo marxalad kasta waxaa ku yaal afar kiniin oo waaweyn. Soo-saaraha ayaa go'aaminaya muddada ay kiniiniyada super-ku shaqeynayaan.
Kiniin kasta oo la cuno wuxuu u dhigmaa toban dhibcood, kiniin kasta oo super ah oo la cuno wuxuu u dhigmaa boqol dhibcood, oo daawade kasta oo la cuno wuxuu u dhigmaa laba boqol oo dhibcood. Cayaartu waa inay socotaa ugu yaraan 2 waji.
Markii la abuurayay ciyaarta, Toru Iwatani wuxuu doonayay inuu soo jiito dhagaystayaasha haweenka qaabka rabshadaha iyo rabshadaha ka yar. Iyada oo ay taasi jirto, qolalka ciyaaruhu waxay sii ahaadeen meelo u badan ragga. Sidaa darteed, horumariyaha ayaa u baahday inuu abuuro ikhtiyaar kale oo cusub.
Si kastaba ha noqotee, xalka ayaa ku soo baxay si lama filaan ah. Guusha Pac-Man waxay dhiirrigelisay abuurista ciyaarta Crazy Otto. Iyada oo si isku mid ah loo wada ciyaaro iyo nooc dumar ah oo ka mid ah dabeecadaha aasaasiga ah, ciyaarta ayaan xiriir la lahayn Namco.
Marka, Midway, yaa leh xuquuqda Pac-Man gudaha Mareykanka, wuxuu ku dhammaaday iibsashada Crazy Otto oo ku sii daayay magaca Ms. Pac-Man. Ciyaartu waxay keentay tabo cusub sida maanso cusub iyo xawaare dheeri ah.
Wax yar ka dib guushii ay ka gaareen cayaaraha, xuquuqaha ayaa helay culeys warbaahinta kale. Sagaal iyo toban siddeetan iyo labo, dabeecadda ayaa ku guuleysatay nooc ka mid ah taxane animated ah oo loo yaqaan Qandho-Pac-man. Naqshadeynta waxaa soo saartay Hanna-Barbera, oo mas'uul ka ah noocyada dhaqameed sida Flintstones iyo Jetsons.
Intaas waxaa dheer, dabeecadda wuxuu ahaa xayawaankii ugu horreeyay ee videogames. Tan iyo markii ugu horreysay ee ay soo muuqatay, waxay leedahay badeecado summad leh sida caruusadaha, funaanadaha, boorsooyinka dhabarka lagu iibiyo, iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay si dhakhso leh u noqotay mid ka mid ah magacyada ciyaarta ugu caansan ee ka baxsan warbaahinta.
Ugu dambeyntiina, saameynta ay ku leedahay meeraha cayaaraha ayaa ah in xitaa qorayaasha GTA ay yiraahdeen ciyaartu waa sida oo kale Qaniinyo. Sida laga soo xigtay horumariyeyaasha, 2-da kulan waxay ku saabsan yihiin dabeecad ku sii socota dhibcaha khariidada (dadka lugeynaya / kiniiniyada) halka ay eryanayaan kuwa isaga ka soo horjeeda (booliska / cirfiidyada).
Ku raaxeysiga xaqiiqooyinka ku saabsan Pac-Man
Ciyaarta asalka ah, laga bilaabo sagaal iyo toban siddeetan, waa mid ka mid ah afar iyo toban ka mid ah qeyb ka mid ah isku soo ururinta ciyaarta Matxafka Magaalada New York ee Farshaxanka Casriga ah.
Pac-Man wuxuu ahaa ciyaartii ugu horreysay ee lagu daro makaanik awood ku meel gaar ah iyadoo la adeegsanayo cunsur. Fikradda waxaa dhiirrigeliyay xiriirka Popeye iyo isbinaajka.
Mid kasta oo ka mid ah kuwa ka soo horjeedaa ciyaarta wuxuu leeyahay shaqsiyad ka duwan. Tani waxay cadeyneysaa markaan eegno magacyadooda Jabaaniis: Casaan oikake (Dabagal), Machibuse casaan (Gaadmo), Kimagure buluug (Degganayn) iyo Otoboke oranji (Doqon) Ingiriisiga, magacyada waxaa loo tarjumay Blinky, Pinky, Inky, iyo Clyde.
In kasta oo ciyaartu tahay mid aan dhammaad lahayn, waxaad heli kartaa ciyaar kaamil ah. Waxay ka kooban tahay dhammee laba boqol iyo konton iyo shan heer adiga oo aan nafta kaa lumin oo soo ururi shay kasta oo ka mid ah ciyaarta. Intaas waxaa sii dheer, mid kasta iyo nooc kasta oo muuqaal ah waa in lagu cunaa shaqo kasta oo awood-koronto ah.
Si loo ixtiraamo xayeysiinta ciyaarta, Google wuxuu daabacay nooc la ciyaari karo oo ah Pac-Man oo ku saabsan sannad-guuradii XNUMX-aad ee ciyaarta.